PSJTV | अल-मुस्तफा उवाच
आइतबार, २० साउन २०७५ पिएसजे साहित्य
यदि कतै तिम्रो हृदयमा प्रेम प्रकाशित भयोभने
भलै उस्को बाटो कठिन र भिरालो हुनेछ
उस्को पछि लाग्नू।
यदि उस्ले आफ्नो पखेटाले तिमीलाई छोप्योभने
अदृश्य तलवारले भलै उस्ले तिमीलाई घाइते बनाउनेछ
तैपनि उप्रति समर्पित भैदिनू।
प्रेमले यदि केही बोल्योभने
भलै उस्को तीखो आवाजले तिम्रा सपनाहरु
हुरीले बगैंचामा फूलहरु सोत्तर पारेझैं भताभुङ्ग बनाइदिनेछ
उमाथि विश्वासभने नमार्नू।
उस्लेनै तिमीलाई हुर्काउनेछ
अनि उस्लेनै तिमीलाई खुट्याउनुपनि पर्नेछ।
उस्ले तिम्रो उचाइमा चढेर घाममा नाचिरहेका
तिम्रा हागाँबिगाहरुलाई सुम्सुम्याउनेछभने
उस्लेनै तिम्रो जरामा उत्रेर
तिमीलाई जगबाटै थर्थराउनेछ।
अन्न भित्र्याएजसरी उस्ले तिमीलाई पहिले जम्मा गर्नेछ
अनि भुसका छोक्राहरुबाट स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म
तिमीलाई सेतै र नाङ्गै नहुन्जेल निफन्नेछ।
तर, यदि तिमी प्रेममा अनवरत
शान्ति र खुशीमात्रै खोजिरहेका छौभने
तिमी प्रेमको आगँनबाट नाङ्गै निस्कँदा हुन्छ।
भावनाको कुनै मौसमनै नभएको दुनियाँमा निस्कँदा हुन्छ
जहाँपनि तिमी हाँस्न चाह्यौभने
आधामात्र हाँस्न पाउनेछौ
र धित मर्नेगरि रुन पाउनेछैनौ।
प्रेमले दिन जानेको छ
तर आफैंलाई बाँडेर।
प्रेमले लिन जानेको छ
तर आफैंलाई काटेर।
प्रेमले कसैलाई स्वामित्वमा लिन जानेको छैन
न ऊ कसैको स्वामित्वमानै बस्छ।
प्रेम: प्रेममै पुगेरमात्र पर्याप्त हुन्छ।
यदि तिमीले साँच्चै प्रेम गर्यौभने
कहिल्यै - 'मेरो हृदयमा ईश्वर छ' भनेर नभन्नू
बल्कि यो भन्नू- 'ईश्वरको हृदयमा म छु।'
कहिल्यै नसोच्नूकि तिमीले प्रेमलाई आफ्नो बाटोमा डोर्याउनेछौ
बल्कि यदि तिमी लायक रहेछौभने
उस्ले तिमीलाई आफ्नो बाटोमा डोर्याउनेछ।
प्रेमसंग आफूलाई प्रेमले भर्नेबाहेक
अरु कुनै शेष चाहना हुँदैन।
तर, यदि प्रेमसित तिमी केही चाहना राख्छौभने
कृपया तिम्रा चाहनाहरु यस्ता होऊन्..
-पग्लिएर रातमा सुसाउने नदीझैं प्रेमको गीत गुनगुनाउन पाऊँ!
-कोमल हुनुको बदलामा
घोर पीडा महसूस गर्न पाऊँ!
-आफ्नै प्रेमको बुझाइले गर्दा
रन्थनिनेगरि घाइते हुन पाऊँ!
पीडाको रगतमा सललल.. बग्न पाऊँ!
-साँझमा धन्य भाव लिइ फर्किऊँ
र हृदयमा प्रार्थना बोकि
प्रेमको काखमा ढुक्कसंग निदाउन पाऊँ!
खलील जिब्रान १८८३ मा जन्मिएका प्रशिद्ध लेबनानी-अमेरिकी लेखक हुन्। उनको किताब 'द प्रोफेट' एक विश्वप्रशिद्ध कृति हो। जिब्रानले साहित्यमा 'महजर अभियान' चलाएका थिए जसले अमेरिकामा अरबी डायस्पोरा साहित्यको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो।
जिब्रानको मृत्यु १९३१ मा अमेरिकामा ४८ वर्षकै उमेरमा अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण भयो।
(अनमोल कंडेल द्वारा नेपालीमा अनुवादित )
कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशमा काम गर्दै आएका सरकारी चिकित्सकलाई संघमा लैजानु गलत भएको बताएका छन् । सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री सुवेदीले प्रदेश नै रित्तो ...
काठमाडौं: नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वको हजार र एसियाको तीन सय उत्कृष्ट विश्वविद्यालयभित्र परेको छ । बेलायतको ‘द टाइम्स हाइअर एजुकेसन’ म्यागेजिनले सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड युनिभर्सिटी (याङकिङ–२०१९’ अनुसार त्रिवि ...